Kedu ihe bụ mmanu - ihe nwere ike dochie anya mmanu?
Kedu ihe bụ mmanu mmanu, otu esi ahọrọ ma jiri ya n'ụzọ ziri ezi?
Otutu ohere iji megharia uzo di omimi naenye ude a di nma. Kedu ihe bụ mmanu - n'asụsụ Latịn, a sụgharịrị okwu a "iji mee ka ọ dị mma", nke a bụ onye mmanu pụrụ iche, onye aha ya nyere gels gels. E nwere ụdị ọgwụ dịgasị iche iche, ị ga-ahọrọ ụdị ude ahụ, dabere na ya na usoro nke ngwa.
Kedu ihe mere m ji achọ mmanu?
Ọtụtụ ndị nwere ajụjụ: gịnị kpatara m ji chọọ mmanu mmiri? A na-emepụta ọgwụ a iji cheta nzube na usoro nke ngwa. E kewara ihe ahụ n'ime ìgwè ndị a:
Na-egbochi ime ime;
ichebe onwe ya pụọ ​​na ọrịa ndị na-eme ihe n'eziokwu .
Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eme mkpesa na enweghi mmanu n'oge oge ma ọ bụ ike na-adịghị ike. Nke a na-emekarị mgbe ị na-enwe ime mpụ, mgbe a mụsịrị nwa, n'oge a na-enwe mmekọahụ marathon. Ihe mgbaàmà ndị a bụ n'ihi ọtụtụ ihe kpatara ya:
ike ọgwụgwụ ma ọ bụ enweghị ya;
ọrịa ọrịa mkpụrụ ndụ;
mgbanwe mgbanwe ahụ na ahụ.
Kedu ihe bụ mmanu - e kere gel ndị a iji belata ihe mgbu na nchekasị n'oge arụmọrụ chiri anya, ma ma na enweghi condom. Ha na-ebelata esemokwu nke mgbanye ahụ, meziwanye nhicha ahụ, mepụtara usoro "mmanu mmanu moisturizing" maka mmekọahụ gbasara ike. Gels with flavorings add spice to the process, e nwere ọtụtụ dịgasị iche iche flavors, ma mkpụrụ osisi na ifuru. Ndị gel ndị a aghọwo onye inyeaka dị mkpa maka ndị na-agbapụ ụfụ ma ọ bụ ndị gbasara mmekọahụ .
Ndị ọrụ mmanu dị mma na ihe ọjọọ
Enwere ọnọdụ dị iche iche banyere uru na nkwonkwo nke ndị lubricants, ọtụtụ ndị dọkịta na-enweghị ntinye nke ụmụ nwanyị na-atụ aro ka ha gaa hụ onye ọkachamara. A sị ka e kwuwe, eziokwu a nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke ọrịa, nke gel na-enyere aka eleghara. Ma mgbe ụfọdụ, ndị dọkịta na-edezi gel maka ojiji. Ihe ndị dị mma:
Na-egbochi mucosa na-egbuke egbuke site na omume nke iwe na mgbawa, nke nwere ike ịkpata ọrịa.
Wepụ ihe mgbu, belata ahụ erughị ala.
Ogologo oge nwoke na ụlọ ya na-akpachi anya.
Ọtụtụ ndị nwere ajụjụ: ndị na-agụ lubricants na-emetụta echiche? Ọtụtụ ndị dọkịta na-agbaso echiche ahụ na ọ na-emetụta ya, ma bụrụ nke na-adịghị mma. Ebe ọ bụ na ndị na-agụ lubricants niile adịghị egosi na mmiri. E nwere ihe ndị ọzọ na-adịghị mma:
Mmiri mmiri na-adabere na mmiri nwere ike ibute ọrịa nchịkwa.
Parabens na gel na-emekarị ka ọ bụrụ ihe na-ewe iwe.
Enwere ike ịnwe ahụike na mpaghara.
Ugboro ugboro na-eduga ná njedebe maka ntọhapụ nke nsị anụ, ọgwụgwọ nwere ike ịchọrọ.
Taa, e nwere ihe karịrị ụdị ọnụọgụ abụọ dị otú ahụ maka ire ere, na-ahọrọ onye mmanu maka inwe mmekọahụ, ọ dị mkpa iburu n'uche ya. A na-eke ọgwụ ahụ na ụdị 3, dabere na ndabere:
Silicone. Ihe ndi ozo: emela ka obi ghara iru gi ala. Cons: nwere ike ịhapụ ntụpọ.
Mmiri. Ihe na-eme: anaghị ahapụ ọnụgụ, ego bara uru. Cons: ngwa ngwa gwu.
Mmanụ. Ọzọkwa, ọ bụghị nke e dere, ma na minuses: ibibi condom, hapụ indelible stains.
Na mmanu na mmiri
Ihe kachasị ewu ewu bụ mmiri mmanye na-ejide onwe ya, n'ihi na ọ dị nro na ọnụ ahịa dị mma. Nanị ihe ọjọọ: oge ​​ịgba, abalị ịhụnanya, dose ezughi. Eziokwu a bu eziokwu nke bu eziokwu:
Enweghị ihe mgbochi, dị mma maka ndị di na nwunye nwere nnukwu uche;
Ọ na-aga nke ọma na condom;
Na-eme ka enwe mmetụta zuru oke;
O yiri nke a na-ejikọta na griiz.
Ọfụfụ dabeere na silicone
Onye mmanu mmanu di kwa nma nke oma, ihe di ya karia n'omume ndi ozo. Ma, ọ na-enwe oge na-adịghị mma maka mmekọrịta chiri anya:
Nwere ike ịkpasu nwanyi iwe.
A na-asacha stains.
Ọnụahịa ahụ bụ usoro ịdị elu karịa nke ogige ndị ọzọ.
Onye mmanu mmanu
Enwereghi mmanu mmanu site na ngwa a, n'ihi na anachacha ya nke oma, na ihe ndi ozo na akwa akwa na ihe siri ike iwepu. Ihe ndi ozo gunyere jelii mmanu na vitamin E, nke na-ebibi ihe condom di ngwa ngwa, di egwu maka ihe eji egwuri egwu nwoke na nwanyi. Na-adịrị maka ndị di na nwunye na-ahọrọ inwe mmekọahụ n'enweghị condom maka mgbe a na-ejikarị onwe ha eme ihe.
Kedu otu esi ahọrọ mmanu?
Ịzụta gel dị mma, ọ kachasị mma ịkpọtụrụ ụlọ ahịa ọgwụ ma ọ bụ ụlọ ahịa ịzụ ahịa pụrụ iche. A na-atụ aro ka ị jiri nlezianya nyochaa ma a gaghị agbaji nkwakọ ngwaahịa ahụ, ma ụbọchị njedebe ma ọ bụ ntụkwasị obi nke onye na-emeputa ahụ anwụwo. Ọ bụrụ na onye si na di na nwunye nwere ọrịa na-efe efe, ọ bara uru isoro dọkịta na-ekwurịta okwu. Ebe isi okwu maka ịhọrọ: ihe mmanu mmanu a ga-eji mee ihe, aro ole na ole na nke a:
Ejila gels maka gbasara ike nwoke maka egwuregwu ịhụnanya ọdịnala;
A dịghị eji mmanu mmanu eme ihe maka inwe mmekọahụ na condom.
Ọnụ ala dị ala na-egosi ezigbo mma nke ngwaọrụ ma ọ bụ ngwaahịa na-adịghị mma.
Kedu ka esi etinye lubricants?
Mgbe ị na-azụta ihe, ọ bara uru icheta na a na-ekesa gels ndị a n'ọtụtụ ụdị:
Ndị na-agụ agụụ na-enye obi ụtọ: emetụta mmụba nke agụụ mmekọahụ.
Ndị na-aṅụ ọgwụ na-agwọ ọrịa antiseptic: bụ akụkụ nke ọgwụ nje antiviral bụ nke na-egbochi ịrịa ọrịa na-eme ihere.
Ogologo mmanu ndi ozo.
Ndị na-emepụta ọgwụ na-emepụta ihe: nwere ngwongwo spermicidal nke na-ebelata ihe ize ndụ nke ịtụrụ ime.
Nhọrọ site na ndepụta a, ọ bara uru ịṅa ntị na greases na-enweghị glycerol, ebe ọ nwere ike ime ka ero. Ndị na-agụ ụra na-emekarị ka ọ bụrụ ihe na-akpata allergies, n'ihi ya, i kwesịrị ịtụle àgwà nke ndị mmekọ abụọ ahụ. Mgbe a na-etinye gel, a gwara ndị dọkịta ka ha rube isi na ndụmọdụ dị otú ahụ:
iji nwalee nkwụsị iji dochie ebe dị n'ime ahịhịa ahụ, ọ bụrụ na mgbakasị ahụ emee, ọgwụ a adaghị gị mma;
Iji tinye gel ọ dị mkpa na mucous nke a ga-ejikọta, ndị mmekọ abụọ ahụ kwesịrị ime ya;
a na-etinye griiz na condom, ọ bụghị n'okpuru ya, ma ọ bụrụ na condom agaghị ahapụ ya;
mgbe enwere mmekọahụ iji saa mmiri, ọ ga-ekwe omume na ncha, nke dị nro, nke ziri ezi.
Karịa iji dochie mmanu mmanu?
Na uru ha nile, gel ndị a adịghị ọnụ ala, ọtụtụ di na nwunye na-achọsi ike na ihe nwere ike dochie mmanu ahụ. Nhọrọ kachasị mfe bụ mmanụ, ma ọ bụrụ na enweghị ọrịa nke oghere ọnụ. Ma enwere ntụziaka, dị ka ọ dị n'ụlọ, ịkwado mmanụ mmanu n'elu mmiri ma ọ bụ mmanu mmanu:
Anụ anụ ahụ na-agbanye mmanụ, tinye obere mmiri.
Kwadebe jelii jeri na starch, na nhazi nke 1: 1, ma ọ bụrụ na uto dị mkpa, ị nwere ike itinye ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ísì ísì.
Jiri mmanu akwukwo nri ndi a na-azoputaghi, na-agbakwunye aphrodisiac .
Ụdị mmekọahụ ọ dị ka ụmụ nwoke?
Olee otú iji kwadebe maka mmekọahụ ike?
Kedu ka otu nwanyị si enweta orgasm?
Kedu otu esi eme ka guy gaa orgasm?
Ụmụ nwanyị ndị nwanyi
Ncha maka ime ụlọ ịwụ
Green na jaket na fox aji
Thina - uzommeputa
Coxarthrosis nke nkwonkwo ụkwụ - ọgwụgwọ
Style nke teknozu
Mark Zuckerberg n'onwe ya na-agbanwe umu ya nwanyi
Ọchịchị Black Moon
Ihe owuwu na kichin - nhọrọ maka echiche kachasị mma na ihe ngwọta dị mma
Nri ofe na asparagus
Egwu mmiri - otu esi emeri hydrophobia?
Ọkpụkpọ anụ ahụ Sunburn na-agwọ n'ụlọ
Kedu ka esi mee ogwu ọhụrụ?
Uwe ejiji na aka aka